आयोजक सेमिफाइनलमा, पाहुना टोली बाहिरियो – Khel Dainik
रञ्जन अधिकारी पोखरा, ८ माघ / आयोजक सहारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको छ । भारतको सिक्किम युनाइटेड एफसीलाई टाइब्रेकरमा ४–२ गोल अन्तरले हराउँदै सहाराले अन्तिम चारको यात्रा तय गरेको हो । सिक्किम गत वर्ष पहिलो सहभागितामा पनि क्वार्टरफाइनलमा सहारासँगै पराजित भएको थियो । अब सहाराले आर्मी र रमपम झापा ११ को विजेतासँग माघ १२ गते सेमिफाइनल खेल्नेछ ।
पोखरा रंगशालामा भएको निकै प्रतिष्पर्धात्मक खेलमा निर्धारित ९० र थप ३० मिनेट समयमा गोल नभएपछि खेल टाइब्रेकरमा धकेलिएको हो । टाइब्रेकरमा साहाराका गोलकिपर सुजित गुरुङले एउटा पेनाल्टी रोके भने अर्को पेनाल्टी सिक्किमका खेलाडीले बल पोष्ट माथिबाट हानेर चुकाएका थिए । आशिष क्षेत्रीको चौथो पेनाल्टीलाई सहजै गोलकिपर सुजितले रोकेका थिए । सिक्किमका लागि दोस्रो पेनाल्टी हानेका सोनाम तोप्देनको प्रहार पोस्टमाथिबाट बाहिरिएको थियो ।
सहाराका लागि सुसन गुरुङ, शिव सुवेदी, रमेश मगर र कप्तान उत्तम गुरुङले गोल गरेका थिए । सिक्किमका लागि सञ्जय क्षेत्री र फुर्बा छिरिङ लेप्चाले गोल गरेका थिए । त्यसअघि दुवै टोलीले केही मौका पाएका थिए । दुवै टोलीले केही राम्रा गोलका अवसर चुकाउँदा खेल हेर्न उपस्थित झन्डै ५ हजार दर्शकले गोल हेर्न पाएनन् । खेलमा म्यान अफ दि म्याच सिक्किम युनाईटेडका सञ्जय क्षेत्री घोषित भए ।
गत बर्षपनि यी दुई टोलीबीच क्वार्टरफाइनलको पहिलो खेलमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । त्यति बेला सहारा २–० ले विजयी भएको थियो । त्यतिबेला पनि आयोजक सहाराले पहिलो खेल जितेर दोस्रो खेलमा सिक्किमसँग खेलेको थियो भने सिक्किम बाई पाएर सिधै खेलेको थियो ।
सिक्किमको यो दोस्रो सहभागिता हो । सहारा गत बर्ष सेमिफाइनल पुगेको थियो भने टोलीले ११ औं संस्करण जितेको थियो । दुवै हाफमा एक एक आक्रमण क्रसबारमा लागेर ठोक्किएर फर्कनु सिक्किमका लागि दुर्भाग्य सावित भएको थियो । ६१ औं मिनेटमा सिक्किमका सञ्जय क्षेत्रीको क्रसमा अफजल अन्सारीको हेड प्रहार क्रसबारमा लागेर फर्केको थियो । त्यसअघि, २९ औं मिनेटमा सोनाम तोप्देनको क्रसमा नाडोङ भुटियाको हेड प्रहार क्रसबारमा लागेर फर्केको थियो ।
खेलपछि सिक्किमका प्रशिक्षक अर्जुन राईले पाएका अवसर सदुपयोग गर्न नसक्नु नै हारको मुख्य कारण भएको बताए । उनले दुई प्रहार पोष्टबारमा लागेर फर्कनु दुर्भाग्य भएको बताए । लगातार दुवै पल्ट सहारासँग पहिलो खेलमै पराजित भएर फर्कनुपरेपछि अब नआउने ? भन्ने प्रश्नमा आमन्त्रण भए पक्कै आउने जवाफ दिए । उनले आफूबाट रेफ्रीप्रति भएको व्यवहारले दुखित भएको भन्दै क्षमायाचना गरे । पेनाल्टी हान्नु अगावै रेफ्रीको निर्णयप्रति सिक्किमे टोली आक्रोशित थिए । खेलको अन्तिम समयमा पाएको फ्रिकिकमा बल किक गर्न नपाउँदै रेफ्रीले खेल टुंगिएको संकेत गर्दै लामो सिठ्ठी फुकेपछि सिक्किम टोली रेफ्रीको निर्णय विरुद्ध आक्रोषित बन्न पुग्यो । केहि बेर मैदानमा तनाब नै भएको थियो ।
सहाराका प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले पहिलो खेलमा दुईगोल गरेका मार्टिनले ४० प्रतिशत पनि खेल्न नसकेको जनाए । उनले पाएका अवसर खेर जानु नै खेल लम्बिनुको कारण बताउँदै सुरुमा पाएको अवसरमा मार्टिनले गोल गर्न सकेको भए धेरै मेहनत गर्न नपर्ने धारणा राखे ।
अब आईतबार दोस्रो क्वार्टरफाईनल खेलमा लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मस्र्याङ्दी विरुद्ध धरान फुटबल क्लब मैदान उत्रनेछ । धरानले पहिलो खेलमा सशस्त्रको एपीएफलाई १–० गोलले पराजित गर्दै क्वार्टरफाईनल यात्रा तय गरेको हो । डिफेण्डि च्याम्पियन मनाङले चार प्रतियोगितामा उपाधि जितिसकेको छ । उसले २०७२ सँगै २०६०, २०६१ र २०६८ मा पनि उपाधि जितेको थियो । क्याराभान सहित १३ औं सहभागितामा धरान दोस्रो चरण पुगेको यो दोस्रो पटक हो । अघिल्ला दुई संस्करणमा भाग नलिएको धरानले १२ औं संस्करणमा मात्र पहिलो खेल जितेको थियो । अहिले मनाङ जस्तो सशक्त टीम प्रतिद्वन्द्वी पाएको धरान सेमिफाईनल पुगेको खण्डमा इतिहास रच्नेछ ।
आजको दोस्रो क्वार्टरफाइनल
लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मस्र्याङ्दी विरुद्ध धरान फुटबल क्लब
Pic. Unish Gurung
← खुला फुटसल प्रतियोगिता: भाटभटेनी प्रिक्वाटरफाइनलमा १५ औं ज्ञान निकेतन बास्केटबल सोमबारदेखि →
अल्मुतारीले माफी माग्दै भने “नेपाली फुटबललाई मेरो विशेष सम्मान” माघ ९, २०७३
एन्फा प्रवक्ता राईले दिए राजिनामा माघ ९, २०७३
बज्राचार्यको नाममा प्रतिस्ठान गठन गर्ने तयारी माघ ९, २०७३
राखेपको सहयोग माघ ९, २०७३
सुपर लिगमा ललितपुरद्वारा बुटवलको चुनौति समाप्त माघ ९, २०७३
शुरुवात नजिक पुगेर पनि स्थगित भयो फुटसल लिग माघ ९, २०७३